Shiinaha Automatic mashiinka mesh mesh mashiinka soo saaridda iyo Warshad | Youte Makiinado
Mashiinka mesh silig laba geesoodka ah oo otomaatig ah
Automatic Mashiinka mesh siligga laba-geesood ah
Mesh siligga laba geesoodka ah waa mesh silig ka samaysan mesh silig goos goos ah (hexagonal) oo laga tolay fiilooyin bir ah. Dhexroorka siligga la isticmaalay ayaa ku kala duwan hadba cabirka mesh siligga laba geesoodka ah. Shabakado yar-yar oo laba geesleyaal ah oo leh lakabyo bir ah oo galvanized ah ayaa badanaa isticmaala fiilooyin bir ah oo dhexroorkiisu yahay 0.4-2.0 mm, halka shabaqyada leh lakabka PVC ay badanaa isticmaalaan fiilooyinka biraha PVC ee dhexroorkoodu yahay 0.8-2.0 mm. Noocan shabakadda laba geesoodka ah waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa shabakadda go'doominta ee dhul beereedka, xayndaabka daaqa, qafiska xoolaha iyo derbiga dhismaha. Tani waa wax soo saar aad u rajo badan.
Mashiinka mesh silig laba geesoodka ah ee otomaatiga ah ee ay soo saarto warshaddeena ayaa ogaanaya otomaatiga wax soo saarka mesh siligga laba geesoodka ah. Mashiinka net-ka ee laba-geesoodka ah ayaa inta badan meesha ka saaray qaab-dhismeedka farsamada, waxaana laga beddelay gudbinta farsamada oo loo beddelay matoor si toos ah u kaxeeya mashiinka si uu u shaqeeyo, taasoo si weyn u yareynaysa heerka fashilka mashiinka iyo buuqa ka dhasha mashiinka. Tirooyinkan taxanaha ahi waxay sidoo kale qaataan tiknoolajiyadda tolidda ee togan iyo tabanba si toos ah loogu soo saaro birta laba geesoodka ah ee gees laba geesoodka ah oo ku habboon qeexitaanka goomaha. Xilligan waxaa jira noocyo kala duwan, sida 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 1.2 inch, 1.5 inch, 2 inch, 3 inch, iwm. Mashiinno kala duwan iyo qalab kale ayaa sidoo kale loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Mashiinka biraha laba geesoodka ah ee biraha leh wuxuu leeyahay astaamaha naqshad macquul ah, qaab dhismeed fudud, hawlgal xasilloon, waxqabad wanaagsan, hufnaan sare iyo dayactir ku habboon. Waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Afrika iyo dalal iyo gobollo kale.
Hadal ： Soosaarid nooc habeysan
1. Mashiinka saafiga ah ee laba geesoodka ah ee CNC oo si buuxda otomaatig ah u korsada PLC naqshadeynta shaashadda taabashada kombiyuutarka, waxtarka sare iyo qaabeynta mashiinno dhaqaale oo aad u sarreeya, tikniyoolajiyadda barnaamijyada qiimaha dhammaystiran, saxsanaanta sare, adeegga adeegga, xasilloonida waxqabadka iyo hawlgalka nabdoon.
2. Mashiinka mesh silig laba geesoodka ah oo si buuxda otomaatig u ah CNC oo si toos ah u fooraraya una qalabeysan yahay ayaa lagu qalabeeyaa afar matoorro hawlsocodsiin ah oo isku mar la isugu gudbiyo, halkii laga isticmaali lahaa gudbinta farsamada dhaqameed. Qaylada hoose, xawaaraha dhakhsaha leh, soosaarka xasiloon, waxtarka wax soo saarka sarreeya, qiimaha wax soo saarka oo hooseeya, iwm.
3. Ku rakib oo samee nidaam digniin infrared ah, kumbuyuutar tirinta otomaatigga ah, joojinta siligga otomaatiga ah, yaree wakhtiga qashinka dayactirka shabaqa ka dib markii siliggii jabay uu jabay, isla markaana si weyn u wanaajiya waxtarka wax soo saarka.
4. Nidaam kumbuyuutareedka PLC ee saxda ah ee saxda ah, meshku waa qurux badan yahay, fidsan yahay isla markaana lebisan yahay, waxaana lagu xoojin karaa dhexda mesh kasta si kor loogu qaado awoodda jiifa.
5. Mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa nidaam sifeyn otomaatig ah wuxuuna qaataa sifaynta xarunta dhexe, taas oo u jajaban kuna habboon ku shaqeynta iyo dheereynta nolosha mashiinka.
Mesh laba-geesoodka ah waxaa sidoo kale loo yaqaan mesh qaloocin, mesh mesh, iyo mesh jilicsan oo jilicsan. Shabakadan yar ee laba geesoodka ah waxaa badanaa loo isticmaalaa quudinta digaagga, shinbiraha, berriga, bakaylaha iyo xayndaabyada xayawaanka, makiinadaha ilaalinta, jidadka waaweeyn, xayndaabka garoonka iyo shabagyada ilaalinta suunka cagaaran, geedaha dhaadheer (cagaaran), dusha dhagaxa dusha sare ee buufinta mesh silig ayaa laga sameeyay weel u eg sanduuq, sanduuqa saafiga ah waxaa ka buuxa dhagaxyo fowdo ah, iwm, oo loo adeegsan karo ilaalinta iyo taageerida qafiska badda, buuraha, waddooyinka, buundooyinka, baraagaha iyo injineernimada kale. Waa qalab ku habboon xakamaynta daadadka iyo u adkaysiga daadadka.
1. mashiinka mesh silig laba geesood ah
3. Spool istaag
4. Mashiinka fuuli kara
5. Xarig adag oo silig ah
Hore: Mashiinka fuuli jiray Gabion
Xiga: mashiinka mesh silig laba geesood ah
Automatic Plc Control Hexagonal Wire Netting Mashiinka
Mashiinka Mesh Mesh silig galvanized
Mashiinka Mesh Wire mesh Hexagonal
Mashiinka siligga ee laba geesoodka ah
Mashiinka Mesh laba-geesoodka ah
Mashiinka Mesh Mashiinka Samaynta Hexagonal
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Weyn ee Hexagonal
Mashiinka Alxanka Alxanka Hexagonal
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Weyn ee Weyn
Toosan Oo Reverse qallooca Hexagonal Wire mesh Machine